Yuusuf X Cabdillaahi Xasan
Forfattres Bokmaskin, Stockholm, 2004
Buuggan feegarka iyo farbarashada waxa loogu talo galay ardayda yaryar ee bilowga ha, Ha ahaadaan kuwa ku jira xannaanooyinka ama sannadka koowaad eedugsiga hoose gaar ahaan lix jirrada. Buuggani waxa uu ka kooban yahay, afar qaybood oo dhammaantood isku wada xiran oo is wada furfuraaya. Qaybta koowaad waa sawirro keliya oo laga doonayo in uu ardaygu midabeeyo.
Qaybta labaadna waa tiradii oo iskugu jirta, waxyaabihii uu ilmuhu tirada ku baranayey oo uu tirinaye, kuwaas oo haddana laga doonayo in uu weliba midabeeyo tirada iyo sawirrada intaba.Qaybta saddexaad waa barashadii xuruufta ama alfabe- tada, kuwaas oo iyaguna iskugu jira xarafkii oo laba jaad ah, mid dhammaystiran iyo mid dhexda ka bannaan oo ardayga laga rabo in uu buuxiyo oo uu midabeeyo.
Qaybta afraad oo ah qaybtii ugu danbaysay buuggan ardaygu waxa uu ku baranayaa shaqallada iyo shibba- nayaasha, waxa intaa soo raaca isagoo ku baranaya siday u kala horreeyaan ama ay iskugu xigaan iyo weliba siday u dhawaaqay- aan. Buuggan waxa qoray Yuusuf X. C/hi Xasan (youssuf Hassan) oo ah bare wax ka dhiga dugsiyada ku yaal waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Stockholm